Inspiration: တွမ်ပီတာ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 13, 2006 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ငါကြမ်းတမ်းသောနေ့ကရှိခဲ့ပါတယ် ငါကြမ်းတမ်းသောအပတ်ကရှိခဲ့ပါတယ် ဒီတစ်ခါလည်းဒါတစ်လဖြစ်လိမ့်မယ် ငါလှုံ့ဆော်မှုအချို့လိုအပ်သည်။ ဒီနေ့မှဆလိုက်အနည်းငယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည် Tom Petersဒီမှာမျှဝေဖို့အကြိုက်ဆုံးအချို့ရှိပါတယ်:
သငျသညျပြောင်းလဲမှုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်, သင်ပင်လျော့နည်း irrelevance ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။ - အထွေထွေအဲရစ် Shinseki ။ အမေရိကန်ကြည်းတပ်
စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလိုက်စားမှသာရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ - ဒန်နီယယ်မူဇီကာ၊ မဟာဌာနမှူး၊ ဆော်ဒါစီးပွားရေးကျောင်း၊ ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် (FT / 2004)
အက်ကွဲသူများအလင်းထဲ၌ ၀ င်ပါစေ - Tom Peters
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးသည်စွမ်းရည်ကြီးမားစွာသွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုမရှိသူ၊ အတိုက်အခံပြုသူများနှင့်သူပုန်များကြားတွင်အခွက်တဆယ်ကိုအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မည်။ - David Ogilvy
လူတွေကသူတို့ထက်ပိုကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်ကြတယ်။ သူတို့ဟာတကယ်ဂုဏ်ယူတယ်၊ သူတို့အတွက်တိုက်ပွဲတွေ၊ ယုံကြည်မှုအတွက်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ချင်တယ်။ - Howard Schultz, Starbucks (IBD / 09.05)
အမှုအရာထိန်းချုပ်မှုအောက်ပုံရသည်ဆိုပါကသင်ရုံအလုံအလောက်အစာရှောင်ခြင်းမသွားဘူး။ - Mario Andretti
တစ် ဦး "dramatic" အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်း ?? စည်းရုံးရေးအပြောင်းအလဲအစီအစဉ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ - RG
ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဂရုစိုက်ရန်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ထိုတွင်မရှိဟန်ဆောင်နိုင်သည်။ - Texas Bix Bender
စီမံခန့်ခွဲမှုဟုခေါ်သော ၉၀ ရာနှုန်း လူတွေကိုခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ပါ ၀ င်တယ်။ â ?? ပတေရုသ Drucker
Execution ဆိုတာဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ လျစ်လျူရှုစွာလိုက်နာခြင်း၊ - Larry Bossidy နှင့် Ram Charan / Execution - အရာဝတ္ထုများကိုရယူခြင်း၏စည်းကမ်း
ထိပ်ဆော့ဗ်ဝဲ developer များသည်ပျမ်းမျှဆော့ဝဲလ် developer များထက် 10X သို့မဟုတ် 100X သို့မဟုတ် 1,000X သာမက 10,000X ထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ - Nathan Myhrvold, ယခင်သိပ္ပံပညာရှင်ချုပ်၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားအောင်မြင်မှုရရန်အခွင့်အလမ်းများပေးပါ။ အကယ်၍ သူတို့မအောင်မြင်ပါက၎င်းတို့အားအခြားနေရာများတွင်အောင်မြင်ရန်အခွင့်အရေးပေးပါ။ တခါတရံမှာသူတို့ကိုပစ်ခတ်ဆိုလိုသည်။ - ဘယ်သူကဒီကိုငါ့ကိုပြောလဲဆိုတာငါမမှတ်မိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့အတူနေခဲ့တယ်။
Window Wars …တည်နေရာ, တည်နေရာ, တည်နေရာ
စက်တင်ဘာ 14, 2006 မှာ 9: 18 AM
Peter Drucker ၏ကိုးကားချက်သည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံး၊ ကောင်းသောရေးသားချက်ဖြစ်သည်။
14:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 22 မှာ
ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော“ Cracked Ones Let in the Light” ဖြစ်ကောင်း Tom Peters ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အက်ကွဲပါသည်။ ငါတကယ်နားထောင်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်သတိထားဖို့မလိုအပ်တဲ့အရာက Mario Andretti ရဲ့ကိုးကားချက်ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါ“ ကြိုက်နှစ်သက်ရာပထမအဆင့်” ကိုကြိုက်တယ်။ စည်းရုံးရေးအပြောင်းအလဲအစီအစဉ်သည်သိသာထင်ရှားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ” - RG၊ အကယ်၍ သင်ကကမ္ဘာကြီးကိုအောင်နိုင်ချင်ရင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အောင်နိုင်ရမည်၊ သို့မဟုတ်၊ “ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တော်လှန်ရေးမစတင်ဘူး၊ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်၎င်း၏လမ်းကိုလုပ်ဆောင်သော်လည်းလူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏လူမှုစီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံသို့တက်လှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တဖန်ဤစကားများ, အနည်းဆုံးငါထင်အရှေ့ပိုင်းအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ထံမှစစ်ပွဲ၏အနုပညာကနေပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်စာပိုဒ်များ, ဒုတိယကတော့ယုံကြည်တာလား၊ မယုံဘူးလား၊ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Joseph Bueys က ၆၀ နဲ့ ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေအလယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။
14:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 6, 46 မှာ
RG သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ၎င်းသည်တွမ်ပေတရု၏တင်ပြချက်များကိုကိုးကားခဲ့သည်။
ငါနှင့်သင်သဘောတူသည်။ ထိုကိုးကားချက်များအားလုံးသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားပြောင်းလဲခြင်းတွင်သူတို့အမှန်တကယ်ထိန်းချုပ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာအပေါ်အရေးယူရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်နှင့်တူသည်!